Maxaa kajira in xabsiga laga sii daayay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon? | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Maxaa kajira in xabsiga laga sii daayay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon?
Maxaa kajira in xabsiga laga sii daayay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon?
24-kii saacadood ee la soo dhaafay ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafinayay warar is burinayay oo ku saabsanaa in xabsiga laga siidaayay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo muddo sanad iyo dhowr bilood ah ku jiray xabsi.
wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon
Hadaba, Abwaan Saciid Gaheyr oo kamid ah Abwaaniinta deegaannada Soomaaliland ayaa sheegay in wararkaas sheegaya in xabsiga laga siidaayay wariye Cabdimaalik Coldoon aan waxba ka jirin, isla markaana weli uu xiran yahay.
Waxaa uu sheegay in laba midkood lagu siideyn karo wariye Coldoon, kuwaas oo kala ah, in uu kusoo baxo cafsi madaxweyne iyo in uu dhameysto waqtiga uu ku xukunaa.
8-dii Bishii July saadkii 2018 ayaa maxkamadda magalada Hargeysa waxaa ay wariye Cabdimaalik Coldoon ku riday xukun saddex sano iyo lix bilood ah, kadib markii lagu eedeeyay inuu af lagaadeeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dugsiga Abaarso oo ku yaalla magaalada Hargeysa.